ဝက်နံရိုးနဲ့ပယ်ကောစွပ်ပြုတ် easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ၀က်နံရိုးနဲ့ပယ်ကောစွပ်ပြုတ် easy cook
၀က်နံရိုးနဲ့ပယ်ကောစွပ်ပြုတ် easy cook
Posted by weiwei on Jan 12, 2012 in Food, Drink & Recipes | 18 comments
တရုတ်နှစ်ကူးနားနီးပြီဆိုတော့ တရုတ်အစားအစာတစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ပယ်ကောလို့ခေါ်တဲ့ အစေ့လေးတွေ တရုတ်တန်းနဲ့ စီးတီးမတ်တွေမှာ ရောင်းနေတာတွေ့မိလို့ ၀ယ်လာပြီး ၀က်နံရိုးနဲ့ စွပ်ပြုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အခွံမာမာနဲ့အစေ့ (ဓါတ်ပုံထဲကအတိုင်း) ကို ရေခဏစိမ်ပြီး ထုလိုက်ရင် အထဲက အစေ့ခပ်ဝါ၀ါလေးရပါတယ်။ အညိုရောင်အခွံပါးပါးလေးကို လက်နဲ့တွန်းချွတ်လိုက်ရင် ချက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီ။
၀က်နံရိုးကို ရေစင်စင်ဆေး၊ ဆား၊ သကြားနဲနဲနဲ့နယ်ပြီး မီးဖိုပေါ်ခဏလောက်ခြောက်အောင်လှော်ပေးရပါတယ်။ ခပ်ညိုညိုလေးမွှေးလာရင် ရေထဲပြီးနူးလာသည်အထိပြုတ်ရုံပါပဲ။ ကျွန်မကတော့ မြန်မြန်ကျက်အောင် ပရက်ရှာကိုကာနဲ့ တည်လိုက်ပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်ဆို နူးပြဲသွားပါတယ်။ နံရိုးနူးတော့မှ ပယ်ကောထည့်ပြီး ၅ မိနစ်လောက် ထပ်တည်လိုက်ပြီးရင် စားလို့ရပါပြီ။
ပယ်ကောရဲ့အရသာက စိမ့်ပြီး အခါးဓါတ်အနဲငယ်ရှိပါတယ်။ ၀ါးစားရင်း စီးတီးတီးနဲ့နူးညံ့ပါတယ်။ အရသာကို စာနဲ့မရေးပြတတ်လို့ ၀ယ်ပြီးချက်စားကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အခုလို တရုတ်နှစ်ကူးနီးတဲ့အချိန်မှာမှ ၀ယ်လို့ရပြီး တခြားအချိန်တွေဝယ်ချင်ရင် တော်တော်ရှားတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်တွေအလွန်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ လူသိနဲသေးတာမို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၀က်သားမစားရင် ကြက်သား၊ ဘဲသားတို့နဲ့လည်း စွတ်ပြုတ်လုပ်စားလို့ရပါတယ်။
မိဘ ချက်ကျွေးတာပဲစားလာတာကြာပြီ သူများတိုင်းပြည်ရောက်တော့ သူများချက်ကျွေးတာစားရတာလဲ ဘာပြဿနာမှမရှိ ကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့ဖြစ်လာတော့ ဘယ်ကစပြီးလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ဒီရွာထဲရောက်မှပဲ အစားမျိုးစုံ လုပ်စားဖြစ်တယ်.. အသားဟင်းဆို လုံးဝကိုမကြိုက်တာ ခိုယီးရားမှာ ၀က်နံရိုးဟင်းမစားရင် ငတ်သေဘို့ပဲရှိတယ် .. ဒီပုံစံလဲ လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်..
ခိုယီးရား ၀က်နံရိုးဟင်းက နာမည်ကြီးလေ…………
၀က်ခြေထောက်စွတ်ပြုတ် နဲ့ ကြာဆံကြော်သုတ်လေးနဲ့ဆို
ခေါင်းသုတ်လေးတစ်ပွဲပါမှာပြီး စားတတ်တာဗျ၊ ကျွန်တော်က။
အိမ်မှာတော့ ၀က်သား မတင်ဘူး
၀က်သားကို စားရင် အဲဒီလို အ၀စားတာ။
စွတ်ပြုတ်ရယ်၊ ကြာဇံကြော်သုတ်လေးရယ်၊ ခေါင်းသုတ်ရယ်
အ၀စားတာဗျို့။ အခုတောင် ဗိုက်ဆာလာပြီဗျာ။
ပဲကော ခေါ် နှစ်တစ်ရာ ပဲ က ယောက်ျားအား ကို ထူးရှယ် ဖြစ်ထွန်းစေတယ် တဲ့
ကျုပ်တို့ ကတော့ စကော့စမ်းရေလေးနဲ့ မြည်းနေကြပေါ့ဗျာ
“ပယ်ကော” ဆိုတာ အခုမှကြားဘူးတယ်။
သူငယ်ချင်း အရင်းကြီး တွေ မှာ တရုတ်နှစ်ကူး လုပ်သူတွေ များပေမဲ့ ငယ်တုန်းက အစား စားဖို့ ကိုဘဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့ လို့လားမသိ။
ချက်နည်း တွေ နဲ့ ဟင်းအမယ်ထဲမှာ ဘာတွေပါတယ် ဆိုတာ မသိခဲ့တာလား။
ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ “ပယ်ကော” က အခုမှ ခေတ်စား လာတာတာမို့ မသိခဲ့တာလဲ ထင်ပါရဲ့။
အင်္ဂလိပ်လိုလဲ ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိ၊ တရုတ်စာလုံးလဲမသိလို့ မြန်မာတွေအသံထွက်တဲ့အတိုင်းပဲ ရေးလိုက်တာ …
မောင်ပေပြောတဲ့ ပဲကောလို့လဲ အသံထွက်တယ်ထင်ပါတယ် …
စားလို့ကောင်းတာအမှန်မို့ တကူးတက၀ယ်ချက်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပါ …
အဲဒါကို မန္တလေးက သူငယ်ချင်းက ပို့ပေးလို့ ဒီအတိုင်းပြုတ်ပြီး စားဖူးတယ်။ နည်းနည်းခါးပြီး စေးတေးတေးနဲ့ စားကောင်းတယ်။ ဟင်းတော့ ချက်စားရကောင်းမှန်း မသိဘူး။
တခါပဲစားဘူးတယ်လို့ မှတ်မိတယ်။ ဘာမှန်းလဲမသိဘူး။
တရုတ်အစားအစာတွေထဲမှာ ဘာမှန်းမသိတာတွေက အများကြီးဆိုတော့
အန်တီဝေကို သဂျီးနဲ့အမျိုးစပ်လို့ ကုလားမထင်နေတာ တရုတ်မှန်း အခုမှသိတော့တယ်။ ဟက်ပီးနယူးရီးယားပါခင်ဗျာ…..
ကုလားမ လဲမဟုတ် .. တရုတ်မ လဲမဟုတ်တဲ့ ဗမာမပါ ဦးကြောင် ….
နိုင်ငံတကာမှာ မရှိတဲ့ ဟင်းအမည်တွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ တီထွင်ချက်ပြုတ်ပြီး brand တစ်ခုရမလားလို့ ကြိုးစားနေတာမို့ ကုလားစာဖြစ်လိုက် တရုတ်စာဖြစ်လိုက် ကိုရီးယားစာဖြစ်လိုက်နဲ့ ..
ကူးသွားတယ်နော်မမဝေ၊ ကျနော်က ၀က်သားမစားတော့ ကြက်သားနဲ့လုပ်စားကြည့်မယ်…….
အဲဒီဟင်း တစ်ခါမှစားဘူးဘူး အဲဒီ အသီးက ဘယ်မှာဝယ်ရတာလဲ မမဝေ … ချက်စားအုံးမယ်..
ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်က CityMart မှာတွေ့လို့ ၀ယ်လာပြီးချက်လိုက်တာ …. ရိုးရိုးဈေးတန်းထဲမှာတော့ မရောင်းဖူးထင်တယ် …
အဲဒီပန်းကန်ထဲကလောက်ဆို တစ်ထောင်ဖိုးလောက်တော့ရှိမယ် …
ဝက်နံရိုးတော့ကြိုက်တယ် အဲဒီအသီးကိုတော့ တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး
မဝေက ကောင်းတယ်ညွှန်းလို့ ချက်စားကြည့်ဦးမယ် ………..
ခါတိုင်းတော့ ပဲကောကို ဒီတိုင်းလေး ကြော်ပြီး အရည်နဲ့စားဖူးတယ် အပေါ်က အုန်းသီးတွေခြစ်ပြီး ဖြူးထားတာ စားလို့ ကောင်းတယ် ကြိုက်တယ်
အဲဒီ နာမည်တော့ မသိဘူး စားတော့ စားဖူးတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သူများတွေ ဘုန်းကြီးကို ကပ်တဲ့ အခါ ဆွမ်းပွဲကျမှာ စားဖူးပါတယ်။
အဲဒါမျိုးပေါ့.. ဘာသာရေးလိုက်စားတယ် ဆိုတာ.. ဟဲဟဲ..
သူများတွေကတော့ ပြောတယ် နှစ် ၁၀၀ ပဲတဲ့.. ဈေးကြီးတယ်တဲ့ ခါးသက်သက်နဲ့ မို့ မကြိုက်လှဘူး။
ပဲကောလို့ပြောပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတာတွေစားဖူးပါတယ်။